အဝတ်အထည်မော်ကွန်းတိုက် ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » အဝတ်အစား
အမျိုးသားများအတွက် Rugby Hood Sweatshirt
အဆင်ပြေပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် hoodie သင့်အားနွေးထွေး။ စတိုင်ကျစေမည့်ပြည့်စုံသောအမျိုးသား rugby ချွေးထွက်အင်္ကျီကိုသင်ရှာဖွေနေပါက၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ နံနက်ခင်းတွင်ရွာသားများအနေနှင့်ဖြစ်စေထွက်ခွာခြင်းဖြစ်စေ၊ သင်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်သာယာဝပြောမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်၏ဘဝကိုရိုးရှင်းစေရန်သင်၏နားကြပ်ကို၎င်း၏အိတ်ကပ်အတွင်းသို့ချထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
အဆိုပါတီရှပ်တစ် timeless အပိုင်းအစ, သူမ၏ဗီရိုထဲမှာရှိသည်ဖို့စစ်မှန်သောဂန္ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်သမျှကိုလည်းသင့်ရဲ့စတိုင်တစ်ခုအကြီးပိုင်ဆိုင်မှုသည်။ sexy ရပ်ဘီတစ်ရှပ်အင်္ကျီ polycotton, ရိုးရှင်းပြီးအလွန်ထိရောက်သောအတူမီးမောင်းထိုးများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ S က, M, L, XL နှင့် XXL အတွက်ပျော့နှင့်ရရှိနိုင်သောအဆင်ပြေတစ်ဦးက timeless ရှပ်အင်္ကျီ, ကအားလုံးကိုအမျိုးသမီးများသည်စုံလင်သောအဝတျကိုရှာဖွေခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီအခြေခံ crewneck သည်အတိုင်း, က ...
timeless အဆိုပါချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီ unisex,
femme, ယေဘုယျ, လူကို
ယခုတပတ်ကျနော်တို့ unisex ချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sexy Rubgy ဆိုင်ဂုဏ်ပြုခြင်းတချို့ key ကိုအပိုင်းပိုင်း၌ထား၏။ ဤသည်အထည်ချုပ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးတစ်ပါးပျဉ်းနှင့်သင့်လျော်အတူပေါ့ပါးထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားရပ်ဂ်ဘီ: လူတိုင်းအတွက်တစ်ချွေးထွက်! ယင်း၏စနစ်တကျအင်္ကျီလက်နှင့်အတူ, သူတို့ wearer များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်မှဿုံလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ အဆိုပါချွေးထွက်၏ပစ္စည်းကိုဝါဂွမ်း (60%) နှင့် polyester (40%) ဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားကအရောင်များကိုလူတိုင်း၏အရသာနှင့်တွေ့ဆုံရန်, ရရှိနိုင်ပါသည်။ ...
လက်ဝှေ့သမား retro လူတို့, Sexy ရပ်ဘီအားဖြင့်ဂန္
အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြမယ့် shorty ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုလျှင်, ယောက်ျားလည်း! ဒါဟာလက်ဝှေ့သမားဿုံနေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးနှစ်သိမ့်ပေးစဉ်ခါးဆစ် masculine မှကိုက်ညီနေသည်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာအစက၎င်း၏ကျက်သရေကြောင်းထူးခြားတဲ့ retro စတိုင် sports ။ ဒါကြောင့်သင်ကကြိုးစားရန်အဆင်သင့်ရှိသနည်း တစ်ဦးက retro စတိုင်ခေတ်သစ်နှစ်သိမ့်၎င်း၏ retro ကြည့်သငျသညျကြှနျုပျသှေးဆောငျပါလိမ့်မယ်။ retro chic ပါ! ဒါဟာပြန်ကြွလာ ...
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဂန္: အတီရှပ်လူကို SR (Sexy ရပ်ဘီ)
Warning ကိုသင်ဂန္နှင့် timeless ဒီချစ်စရာရှပ်အင်္ကျီ, ကိုချစ်ပေမည်။ ဒါကအခြေခံယောက်ျားမဆိုအခါသမယသည်ရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ High-end ချော sexy ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားစတိုးဆိုင်ပေါ်တွင်သင်မှမရရှိနိုင်ပါအရောင်များ၏ကျယ်ပြန့်ကဲ့သို့, သငျသညျလှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။ ဒီရှပ်အင်္ကျီ Sexy ရပ်ဘီမြင်အဆိုပါဂန္တီရှပ်လူကိုလူအပေါင်းတို့သည်, လူအပေါင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ပါ! ခုနစျပါးအရွယ်အစား (S, M, L, XL, XXL, တစ်ဦးစုစုပေါင်းရရှိနိုင် ...
femme, လူကို, ရောင်းချခဲ့
Sexy ရပ်ဘီစတိုးဆိုင်အပေါ်ခရစ္စမတ်မတိုင်မီကနောက်ဆုံးပေးပို့ခံစားရန်သာနာရီအနည်းငယ် (သန်းခေါင်တိုင်အောင်ယနေ့ည) ရှိပါတယ်: ပရိုမိုကုဒ်အားလုံးကိုအဝတ်အစားအပေါ် 15% လျှော့စျေးရ: ဆောင်းရာသီ 18 >> https: / /www.sexy-rugby.com ဒီကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအဘို့အဝတ်အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးကနေမြှင့်တင်ရေးအဖြစ်ကလေးတွေနဲ့အတူတစ်မူရင်းဆုကြေးဇူးကိုရှာတွေ့မှယခုသို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှပါပဲ။ သေး Delivery အချိန် ...